जब कपिललाई थिएटरबाट बाहिर निकालियो..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
जब कपिललाई थिएटरबाट बाहिर निकालियो...
एजेन्सी। कपिल शर्मा कमेडी किङको नामबाट चर्चित छन्। उनको कमेडी शोज विश्वभर लोकप्रिय छ। यस बाहेक उनले फिल्म ‘किस किसको प्यार करुँ’ र फिल्म ‘फिरंगी’ मा अभिनेताका रुपमा पनि काम गरिसकेका छन्। तर के तपाइँलाई थाहा छ, एक पटक फिल्म खेल्न गएका कपिललाई थिएटरबाट बाहिर निकालिएको थियो।
किनभने उनी पाँच मिनेट ढिलो गरी शुटिङको शेटमा पुगेका थिए। यसको खुलासा कपिल स्वयंले नै गरेका हुन्। शनिबारको द कपिल शर्मा शो एपिसोडमा विक्की कौशल र यामी गौतम आफ्नो नयाँ फिल्म ‘उरी’ को प्रमोशन गर्न पुगेका थिए। यही क्रममा कपिलले विक्कीलाई बताए अनुसार जुन २०१८ फिल्म संजू रिलीज हुँदा कपिल एम्सटर्डममा थिए।
उनले त्यहीँ फिल्म हेर्ने निर्णय गरे। कपिलका अनुसार टिकट लिएपछि कपिल र उनका एक जना साथी बर्गर खान गए। बर्गर खाएर आउँदा पाँच मिनेट ढिला भएको थियो। उनीहरु फिल्म हेर्न जाँदा फिल्म सुरु भएको पाँच मिनेट भइसकेको थियो। फिल्म सुरु भइसकेको भन्दै गेटपालेले उनीहरुलाई हलभित्र छिर्न दिएनन्। उनीहरुले गेट पालेलाई टिकट पनि देखाए तर भित्र छिर्न पाएनन्।
कपिलका अनुसार आफूहरुले फिल्म हेर्न नपाएपछि उनका साथीले इन्टरनेटबाट एउटा फोटो निकाले, जसमा उनी संजूका नायक रणवीर कपुरसँग थिए। उनका साथीले यो पोस्टर गेटपालेलाई देखाएर भने, –उनी संजूका निर्माता हुन्।’ गेटपालेले पनि उनीहरुको कुरामा विश्वास गर्दै फिल्म हलमा जान दिए। फिल्म संजूमा विक्की कौशलले संजय दत्तको भूमिका निकै राम्रोसँग निर्वाह गरेका छन्।